भ्यागुतो ! भ्यागुतो माछा ! – मझेरी डट कम
भ्यागुतोको यस्ता करामत कर्तूत देख्दा राष्ट्रिय जीव भ्यागुतो बनाउनु पर्ने हो । साँचै भन्ने हो भने ‘छलाङ्ग’ भन्ने शब्दका महान् स्रष्टा भ्यागुता नै हुन् । यसो भन्दैमा भ्यागुताको बारे पीएच.डी. गर्ने धून चढ्ला । माफ गर्नोस् ! यो विषय पीएच.डी. गर्ने नभई पीएच.डी.ले आफ्नो अनुसन्धान बोकाएर दौडाउने विषय हो । अर्थात् भ्यागुते बुद्धि विना कसै कसैको पीएच.डी. पूर्ण हुँदैन । अब हेर्नोस्, विद्यार्थीले भ्यागुतो सिद्धान्त अँगाले मात्र विश्वविद्यालयको पासोजस्तो रहेको कुम्भीपाकबाट मन्त्रीको मनमोजी महलमा भ्यागुतो उफ्राई गरेरै पुग्न सकिन्छ । अरू त अरू अर्थशास्त्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि अरू सारा सिद्धान्त भ्यागुतोमा चढेर नउफ्रने हो भने तिनको गति दुर्गति !